यसरी यौनसम्पर्क गर्नेलाई हृदयघात लगायत मुटुको समस्या हुँदैन ! | यसरी यौनसम्पर्क गर्नेलाई हृदयघात लगायत मुटुको समस्या हुँदैन ! – हिपमत
काठमाडौं,२२ माघ : मानिसहरुका लागी हरेक कुरा सिमित मात्रामा गर्यो भने त्यसले फाइदा पुग्छ । नेपाली समाजमा यौनसम्पर्कलाई अत्ति साँघुरो रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने, यौनसम्पर्क एकप्रकारको शारीरिक व्यायम हो । स्वस्थ्य रुपमा गरिएको यौनसम्पर्कले मुटुजन्य रोगीहरुलाई समेत राम्रो प्रभाव पार्छ ।